Thutasone, Author at Thutasone - Page 66 of 92
Articles by Thutasone
ကျောင်းတွေပြန်မဖွင့်နိုင်ခဲ့ရင် အွန်လိုင်းကနေ စာသင်ဖို့ စီစဉ်နေဟု ဦးဇော်ဌေးပြော . . .
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက စမ်းသပ်မှုတွေ လုပ်နေပါတယ်။ COVID-19 ဂယက်ကြောင့် ဇွန်လမှာ ကျောင်းပြန်ဖွင့်မနိုင်ခဲ့ရင် အွန်လိုင်းကတစ်ဆင့် စာသင်နိုင်အောင် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက စီစဉ်နေကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဇော်ဌေးက ပြောလိုက်ပါတာ်။ ဒီနေ့ မေလ ၁ ရက်နေ့မှာ သတင်းထောက်တွေနဲ့ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ Video Conferencing ပြုလုပ်ရာမှာ ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ […]
ဦးပဇင်း (ဦးကျော်ဟိန်း) ရဟန်းပြုကာစနှင့်မတူ ပြောင်းလဲသွားပုံ . . .
တိုကျိုမြို့မှာ တရားဟောနေတဲ့ ဦးပဇင်း ဦးကိတ္တိသာရ(ဦးကျော်ဟိန်း)ပြောင်းလဲသွားပုံ-မနေ့ညက ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့မှာ တရားဟောနေတဲ့ ဦးပဇင်းဦးကိတ္တိသာရ (ဦးကျော်ဟိန်း)ရဲ့ တရားကိုfbပေါ်ကနေliveလွှင့်နေတာကိုဖွင့်ကြည့်ရင်း နာယူနေမိတယ်။ ရဟန်းပြုကာစတုန်းက အခြေအနေတွေနဲ့လုံးဝမတူတော့ဘဲပြောင်းလဲသွားတာကို ဦပဉ္ဇင်းဟောချက်တွေက သက်သေပြနေပါတယ်။ရဟန်းဝါ (၁၀)ဝါအတွင်းမှာ အကျင့်ဘက်ကို ဘယ်လောက်တန်ဖိုးထား ကျင့်ကြံခဲ့သလဲဆိုတာ ရွေးချယ်လိုက်တဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ အသံနေအသံထားကတဆင့်အဖြေထုတ်နိုင်ပါတယ်။ တရားနာယူရင်း ကြည်နူးကျေနပ် အားကျစိတ်နဲ့အတူ၁၉၉၆ခုနှစ်တုန်းက အတူလက်တွဲရိုက်ခဲဖူးကြတဲ့ “ဝေလည်းမွှေး […]
တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ပြည်သူများကို စားသောက်ကုန် ခြောက်မျိုး အစိုးရပေးမည် . . .
တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ပြည်သူများသို့ အခြေခံစားသောက်ကုန် ခြောက်မျိုး ထောက်ပံ့မည် ပြည်ထောင်စုအစိုးရက တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ပြည်သူများထံသို့ အခြေခံစားသောက်ကုန်များ ထောက်ပံ့နိုင်ရန် စီမံချက် ရေးဆွဲလျှက်ရှိကြောင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရှမ်းတိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး ဦးစိုင်းပန်းဆိုင်က ပြောကြားသည်။ အသက်အရွယ် အပိုင်းအခြား ခွဲခြားမှုအရ စားသုံးနိုင်သည့်အတိုင်းအတာကို သိရှိနိုင်ရန် အသက် ၁၂ နှစ်အောက်၊ အသက် […]
ဝဘောဂီဆေးရုံက ကိုဗဈ-၁၉ လူနာ ကလေး ၂ ဦးနှငျ့ အမြိုးသမီး ၁ ဦးတို့ ရောဂါပိုးကငျးစငျ . . .
မွောကျဥက်ကလာဝဘောဂီဆေးရုံမှာ ဆေးကုသမှုခံယူနတေဲ့ ကိုဗဈ-၁၉ အတညျပွုလူနာ ကလေးငယျနှဈဦးနဲ့ အသကျ ၁၈ နှဈအရှယျ အမြိုးသမီး တဈဦးတို့မှာ ရောဂါပိုး မတှရှေိ့တော့ဘူးလို့ ကုသပေးနတေဲ့ ကလေးအထူးကု ဆရာဝနျ ဒေါကျတာခငျခငျထားက ပွောပါတယျ။ ပေါကျခေါငျးမွို့က အသကျ ၈ နှဈရှိ လူနာနံပါတျ ၁၉ နဲ့ အသကျ […]
အမီးရ်ခန်း နှင့် ဂျုံမုန့် ” ဒီလောက်ချမ်းသာတာ ဂျုံမုန့်ပဲ ပေးစရာလားတဲ့ ” . . .
အမီးရ်ခန်း နှင့် ဂျုံမုန့် Bollywood ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီး အမီးရ်ခန်းက ဒေလီမြို့ပေါ်မှအ ခက်ခဲရှိတဲ့သူတွေအတွက်ဂျုံအိပ်တွေများစွာထုတ်ပိုးထားပြီးလာယူစေခဲ့ပါတယ်… အချို့တွေက”ဒီလောက်ချမ်းသာတာဂျုံမုန့်ပဲပေးစရာလားတဲ့? ! ဒါကြောင့်သွားမယူခဲ့ကြသူတွေလည်းများစွာရှိခဲ့ပါတယ် ။ စိတ်ဝင်စားစရာလေးတစ်ခုကတော့……အတော်လေးကို ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကတော့ သွားယူပြီးအိမ် ပြန်ရောက်လို့ မုန့်လုပ်ဖို့အိပ်ဖွင့်လိုက်ချိန်မှာ (အိပ်ထဲမှဂျုံမုန့်အကြား) ရူပီး ၁၀၀၀၀(နှစ်သိန်းခန့်)သေချာစွာထည့်ထားပေးတာကိုဂျုံအိပ်သွား ယူသူတွေရရှိသွားခဲ့ပါတယ် ! ဘာကြောင့်အဲ့ဒီလိုလုပ်တာလဲမေးတော့ “တကယ်ကိုလိုအပ်သူတွေရ စေချင်တာပါတဲ့ […]
အာရဟံ ဘုရားကြီးအတွင်း သေဆုံးခဲ့သော (ဦးမြင့်ကို) အမှူ့ ပေါ်ပါပြီ . . .
အာရဟံဘုရားကြီးအတွင်း သေဆုံးခဲ့သော(ဦးမြင့်ကို) အမှူ့ ပေါ်ပါပြီ။ ကိုထွန်း ကိုထွန်း (ဖြစ်စဉ်) ချောက်မြို့လေးမျက်နှာဘုရားတွင် အလှူခံပုံးအဖောက်ခံရပီး လူတစ်ဦးအသတ်ခံရ။ ချောက်မြို့ အမှတ် ၁၀ နယ်မြေ မီးရထားဘူတာအနီးရှိ မဟာဗောဓိ အရဟံ ရွှေစေတီ (မြို့ဦးစေတီ လေးမျက်နှာဘုရား) တွင် ဧပြီလ ၂၆ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းအချိန်ခန့်က […]
နောက် နာရီ (၆၀) အတွင်း မုန်တိုင်းငယ်အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိလာနိုင်ကြောင်း မိုးဇလထုတ်ပြန်
ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေ… (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မေလ (၁) ရက်နေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် (၁၀:၀၀)နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်ချက်) “ယနေ့မြန်မာစံတော်ချိန် (၀၉:၃၀) နာရီအချိန် တိုင်းထွာချက်များအရ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနှင့် ယင်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသော ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့တောင်ပိုင်းတို့တွင် နောက် ၁၂ နာရီအတွင်း လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး၊ ပိုမိုအားကောင်းလာကာ (နောက် […]
မွနျမာနိုငျငံသို့ ပွနျလညျဝငျရောကျလာတဲ့ ထိုငျးရောကျမွနျမာ လုပျသားတှကေို ယနနေံ့နကျတှငျ မွနျမာ-ထိုငျး အမှတျ (၂) ခဈြကွညျရေး တံတားတှငျ စတငျ လကျခံကွိုဆိုနေ ….
မွနျမာနိုငျငံသို့ ပွနျလညျဝငျရောကျလာတဲ့ ထိုငျးရောကျမွနျမာလုပျသားတှကေို ယနနေံ့နကျတှငျ မွနျမာ-ထိုငျး အမှတျ (၂) ခဈြကွညျရေးတံတားတှငျ စတငျ လကျခံကွိုဆိုနေ ထိုငျးနိုငျငံမှ မွနျမာနိုငျငံသို့ ပွနျလာမညျ့ မွနျမာရှပွေ့ောငျးလုပျသားမြားအား မွနျမာ-ထိုငျး အမှတျ (၂) ခဈြကွညျရေးတံတား BCF ဇုနျအတှငျးတှငျ သကျဆိုငျရာ တာဝနျရှိသူမြားက လကျခံကွိုဆိုမှု စတငျဆောငျရှကျနပွေီဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ […]
(၁၅)ကွိမျမွောကျ သိနျးတဈသောငျးခှဲ ကံထူးရှငျ …..
(၁၅)ကွိမျမွောကျ သိနျးတဈသောငျးခှဲ ကံထူးရှငျ . . . Zawgyi ဘာသာအကြိုး သာသနာအကြိုး အမြိုးတှအေကြိုးပိုပွီးသယျပိုးနိုငျပါစခေငျဗြာ ။ မိသားစုနဲ့အတူထပျတူဝမျးသာပါတယျ ။ (၁၅) ကွိမျမွောကျ အောငျဘာလကေပျြသိနျး (၁၅၀၀၀) ဆုရှငျထှကျပျေါ နပွေညျတျောရှိ ဆုလာဘျပိုငျးထီဆိုငျမှ (၁၅) ကွိမျမွောကျ ကပျြသိနျးတဈသောငျးခှဲကံထူးရှငျအား ရနျကုနျမွို့နေ ဦးအောငျနလေ+ […]
« 1 … 65 66 67 … 92 »
ပဲခူးမွို့နယျရှိသံဃာတျောတဈပါးနထေိုငျရာကြောငျးသို့သှားရောကျပွီး ဝါဆိုသင်ျကနျးနှငျ့အတူဆေးဝါးမြားကိုပါဆကျကပျလှူဒါနျးခဲ့ စီနှနျ